नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : देवता र दानव पाइने, मानव नपाइने देश !
कुलतमा लागेको पुत्रलाई कुनै पिताले सही बाटोमा ल्याउन गाली गर्नु या हात चलाउनु ठीक हो कि होइन भन्ने प्रश्नको सर्वसम्मत जवाफ नहुन सक्छ । राम्रो उद्देश्यका निमित्त गलत साधन अपनाउनुलाई सही र गलत दुवै भन्नका लागि यथेष्ठ तर्क हुन सक्छन् । तर, भगवान्हरूले प्राणी कल्याण या सकारात्मक परिणामका लागि गलत साधन अवलम्बन गरेको व्यहोरा शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसर्थमा सकारात्मक परिणामका निम्ति गल्ती गर्ने, र त्यस्तो गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसपछि अर्को गल्ती नगर्ने चरित्र भगवान्हरूमा भेटिन्छ । काम गर्दै जाँदा गल्ती गर्ने र गल्ती सुधारेर अघि बढ्ने स्वभाव–चरित्रचाहिँ मानवमा हुन्छ । मान्छेबाट गल्ती हुन्छ र गल्ती स्वीकार गरेपछि गल्तीको पुनरावृत्ति हुन नदिने चेष्टा पनि मानिसबाट भइरहन्छ । तर, खराब उद्देश्य र निजी स्वार्थपूर्तिका निम्ति जस्तोसुकै गल्ती गर्ने र पटक–पटक गल्ती गर्दै समाज र राष्ट्रलाई क्षति पुऱ्याइरहनेहरूलाई चाहिँ दानवका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
आफू जोगिएको छु भन्ने कसैले ठान्नुपर्ने अवस्था छैन, भोलि हामीमध्येकै कसैलाई ‘चोर’ दोष लाग्यो भने त्यसको प्रचार हुन एक पैसाको विज्ञापन खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन । आरोप लाग्नुपर्छ त्यसको पुष्टि हुनुपर्दैन, तर चोर नभएको पुष्टि भयो भने समाज मौन बसिदिन्छ, फलानालाई मिथ्या आरोप लगाएर अन्याय गरियो भनी सार्वजनिक चर्चाको विषय बनाइँदैन । रूपचन्द्र विष्ट भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘सत्य जतिपटक भने पनि त्यसको वास्ता नगर्ने, झुट छिसिक्क कसैले प्रकट गऱ्यो भने धुमधाम फैलिएर जाने हुँदोरहेछ । नकारात्मक र झुट नै मन पराउने हाम्रो समाजको स्वभाव मनोविज्ञान छ ।’
एकपटक कुनै कारणवश सकारात्मक या नकारात्मक धारणा बनाएपछि त्यसैमा अडिएर बसिरहने, तथ्यहरूले जसरी पुष्टि गरिरहेको भए पनि हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न तयार नहुने नेपाली समाजमा देखिएको नयाँ रोग हो । उदाहरणका लागि केही पात्रहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, त्यसमा एक कुलमान घिसिङ हुन् । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर (२०७३) प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि (या बनाइएपछि) भारतबाट आपूर्ति हुँदै आएको विद्युत्को मात्रामा करिब तीन गुणा बढी थप भयो, त्यसमा कुलमानले केही व्यवस्थापकीय सुधार पनि गरे र, लोडसेडिङको अन्त्य भयो । लोडसेडिङ अन्त्य जुनसुकै कारणबाट भएको भए पनि त्यसको शतप्रतिशत क्रेडिट कुलमान घिसिङले पाए, केवल कुलमानकै दक्षता, क्षमता र प्रयासले मात्र काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको ठहर गर्दै उनलाई ‘भगवान्’ ठान्न थालियो । यसैबीच विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राप्त हुनुपर्ने साढे सात अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् बिलिङ नै नगरीकन निजी क्षेत्रका केही व्यापारीलाई अनुचित लाभ पुऱ्याएको तथ्य सार्वजनिक भयो ।
०६३ सालमा राजाबाट संसद् पुनस्र्थापना भएपछि त्यही संसद्लाई जग बनाएर राजनीतिजीवीहरू आफ्नो जीवनमा यति ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल भएका हुन् । संसद् पुनस्र्थापनाको निम्ति बलियो आधार बनेर बसेका व्यक्ति तात्कालिक सभामुख तारानाथ रानाभाट हुन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । राजाबाट प्रधानमन्त्री बनाइन खोज्दा पनि संसद्को अस्तित्व कायम राखिदिनुपर्ने भन्दै उनी सभामुख छोडेर प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएनन् । तर, एउटा संवेदनशील प्रतिवेदन पढ्ने क्रममा चलनचल्तीको भावभङ्गिमा प्रकट गर्दै उनले ‘भटटट’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । तारानाथले इतिहासमा पुऱ्याएको सम्पूर्ण योगदान बिर्सिएर उनको अविवेकीय ढङ्गले खिल्ली उडाउन उद्यत् देखियो यो समाज । उनीप्रति विवेकसम्मत व्यवहार अहिलेसम्म भएको छैन र सायद अब नहोला पनि । यस्तै सोच सुशीला कार्की, गोविन्द केसी र गगन थापाहरूको सवालमा पनि प्रकट हुँदै आएको छ । सुशीलाले न्यायिक मूल्य, मान्यता र मर्यादामाथि कति ठूलो हिंसा गरिन् र उनकै कारण न्यायपालिका कति ठूलो सकसमा परेको छ भन्ने कुराको महसुस न्याय र कानुन बुझ्ने हरकोहीले गरेका छन् । तर, नेपाली समाजले एकपटक देवी मानेपछि सकियो ! उनका कुनै पनि गल्ती हेर्न–सुन्न समाज चाहँदैन ।
चूडामणि शर्मा नामक एक कर्मचारी कति इमानदार या बेइमान हुन्, समयले त्यसको पुष्टि गर्दै गर्ला । तर, तीसौँ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारबाही शुरु गरेको अख्तियारले उनको सबै सम्पत्ति छानबिन गरिसकेपछि केवल चार करोड रुपैयाँको स्रोत नखुलेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गऱ्यो । अख्तियारले अर्बौंको बदनामी गरेर करोडको मुद्दा चलाउँदा पनि समाज अविवेकीय ढंगले मौन छ । एकपटक आफूहरूले ‘दानव’ ठानिसकेपछि त्यसबारे आफ्नो धारणा बदल्न समाज यहाँ पनि तयार भएन, न अख्तियारलाई हतियार बनाएर शत्रु तह लगाउन क्रियाशील जमातमाथि नै प्रश्न उठाउन कोही अग्रसर भए !
मानिस भएकोले काम गर्दै जाँदा जोकसैबाट गल्ती हुन सक्छ, तर हाम्रो समाजले एकथरी पात्रलाई भगवान् र एकथरीलाई ‘दानव’का रूपमा बुझेको छ । दानव ठहर गरिएकाहरूबाट राम्रै काम भए पनि नदेख्ने, देवत्वकरण गरिएकाहरूको हजार गल्ती पनि छोपछाप गर्न तयार रहने जुन रोग यहाँ प्रवृत्त भएको छ, यसले नेपाल केवल देवता र दानवको लागि मात्र उपयुक्त बसोवास भएको दर्शाउँदै छ । एकपटक कुनै आरोप मात्र लागे पनि जीवनभर त्यसबाट मुक्ति नपाइने र कुनै कारणवश देवत्वकरण गरिएकाहरूबाट अक्षम्य गल्ती भए पनि त्यसलाई देख्नै नखोज्ने जुन सामाजिक रोग नेपालमा पसेको छ, यसले अन्ततः मुलुकलाई बहुआयामिक र दीर्घकालिक क्षति पुऱ्याउने त छँदै छ, नेपालमा विवेकसम्मत व्यवहारको विकासमा पनि अवरोध पैदा गरिरहनेछ ।
यो आलेख पढिरहँदा कतिपयलाई लेखकले ‘भ्रष्टहरूप्रति सहानुभूति पैदा गराउन खोजेको’ भन्ने पनि लाग्न सक्ला । यहाँ उठाउन खोजिएको मुद्दा विवेकसम्मत र मानवोचित व्यवहारको हो । सार्वजनिक पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका या गरिरहेकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने को कति इमानदार भन्ने स्पष्ट हुन सक्थ्यो, त्यसको सम्भावना तत्कालका लागि रहेन । २०६३ पछिको राजनीतिमा हर्ताकर्ताहरूले तोकेका व्यक्तिलाई मात्र गलत ठान्न विवेक मानिरहेको छैन । देवता ठहर भएका या दानवीय भूमिकामा रमाइरहेकाहरूबाहेक यस्तो समाजमा कम्तीमा मानव मात्रलाई चाहिँ जीवन गुजार्न निकै सकस पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, जय श्री पशुपतिनाथ ! - घटना र बिचार